Akụkọ - Azịza nye ajụjụ iri na otu nke kacha amasị gị gbasara pox enwe
Azịza nye ajụjụ iri na otu nke kacha amasị gị gbasara ọrịa anwụ
Dị ka akụkọ zuru oke si kwuo, ruo ugbu a, ọrịa anwụ enwe agbasawo na ngụkọta nke mba 15 na mpụga Africa, na-akpali ịmụrụ anya na nchegbu sitere n'èzí ụwa.Enwere ike ịmalite nje pox enwe?A ga-enwe nnukwu ntiwapụ?Ogwu ogwu kịtịkpa ka dị irè megide ọrịa nrịanrịa enwe?
1. Gịnị bụ enwe?
Monkeypox bụ ọrịa zoonotic viral nke achọpụtara na enwe anụmanụ ụlọ nyocha na 1958, ọkachasị na mba oke ọhịa nke etiti na ọdịda anyanwụ Africa.
Enwere clade abụọ nke nje pox enwe, West Africa clade na Congo Basin (Central Africa).Achọtara ikpe mbụ mmadụ nke butere ọrịa enwe na Congo (DRC) na 1970.
Foto: Ihe onyonyo eletrọn nke afọ 2003 sitere na Centlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) na-egosi irighiri nje oria enwe.
2. Kedu otu enwe na-efe efe?
Enwere ike gbasaa site n'ọrịa enwemmekọ nwoke na nwanyị, mmiri ara, kọntaktị akpụkpọ ahụ, ụmụ irighiri mmiri na-eku ume, ma ọ bụkọntaktị na ihe ndị nje butere dị ka ihe ndina na uwe.
Enwere ike ibunye pox site na yakọntaktị na anụmanụ ndị bu ọrịa dika enwe, oke na osa.
3. Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke enwe?
Monkeypox na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na-amalite dị ka ntụpọ dị larịị, na-acha uhie uhie nke na-etolite ma jupụta na ọtụ.Ndị butere ọrịa ahụ na-enwekwa ahụ ọkụ na ahụ mgbu.
Mgbaàmà na-apụtakarị ụbọchị 6 ruo 13 mgbe ọrịa gasịrị, mana ọ nwere ike were ihe ruru izu atọ.Ọrịa ahụ nwere ike ịdịru izu abụọ ma ọ bụ anọ, yana ọrịa siri ike na-emekarị na ụmụaka, dịka WHO siri kwuo.
4. Gịnị bụ ọ̀tụ̀tụ̀ anwụ nke pox enwe?
Ọ bụ ezie na ọrịa nje na-ebute ọrịa mmadụ na-ebute nje monkeypox dị obere karịa nke nje ya yiri ya, nje variola, ọ ka nwere ike ibute ọnwụ.na ọnụ ọgụgụ ọnwụ nke 1%-10%.Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ọgwụgwọ dị irè maka ọrịa ahụ.
Foto: Onye isi oche WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.Foto nke onye nta akụkọ China News Agency Peng Dawei
5. Ole ikpe dị n'afọ a?
Onye isi oche WHO bụ Tedros Adhanom Ghebreyesus kwuru na ụbọchị iri abụọ na abụọ na ọrịa anwụ enwe agbasala na mba iri na ise na-abụghị Africa.Ekwenyela ihe karịrị ikpe 80 na Europe, United States, Canada, Australia na Israel.
Ụlọ ọrụ US Center for Disease Control and Prevention (CDC) kwuru n'abalị iri abụọ na atọ na ọ na-enyocha mmadụ anọ a na-enyo enyo na ọ bụ ọrịa anwụ enwe, ndị niile bụ nwoke na ihe metụtara njem.Na Europe, UK Health and Safety Authority nyere nkwupụta n'otu ụbọchị ahụ na enwere ọrịa 36 ọhụrụ nke ọrịa enwe na England, a chọtara ikpe mbụ nke enwe na Scotland, ọnụ ọgụgụ ndị ikpe na mba ahụ mụbara ruo 57.
6. A ga-enwe nnukwu ntiwapụ nke ọrịa anwụ anwụ?
Akwụkwọ akụkọ New York Times kwenyere na, n'ọnọdụ nkịtị, enwe anaghị ebute ntiwapụ nke ukwuu.Ihe ntiwapụ kachasị njọ na United States mere na 2003, mgbe e jikọtara ọtụtụ ikpe na ikpughe n'ebe nkịta prairie bu ọrịa na anụ ụlọ ndị ọzọ.
Ọtụtụ n'ime ikpe nke afọ a mere na ụmụ okorobịa.Heiman, onye ọkachamara n'ọrịa na-efe efe nke WHO, rụtụrụ aka na ọrịa na-efe efe enwe ugbu a na mba dị iche iche bụ "ihe omume enweghị usoro", na ụzọ isi ebufe oge a nwere ike jikọta ya na mmekọahụ na-adịghị ize ndụ na nnọkọ abụọ emere na Spain na Belgium.
7. Ọrịa enwe na-agbanwe?
Reuters hotara Lewis, onye isi nke "smallpox secretariat" nke WHO kwuru na 23rd na.o nweghi ihe akaebe na-egosi na nje pox enwe agbanweela, ma rụtụ aka na ohere nke nje mutating dị obere.
Ọkachamara ọrịa na-efe efe nke WHO Van Kerkhove kwukwara na ikpe a na-enyo enyo na nso nso a na Europe na North America adịghị njọ, na ọnọdụ ugbu a bụ nke a ga-achịkwa.
PHOTO: Onyonyo microscope eletrọn nke ụlọ ọrụ US maka njikwa na mgbochi ọrịa wetara na-egosi nje oria enwe tozuru oke (aka ekpe) na virions akabeghị aka (n'aka nri).
8. ogwu ogwu kịtịkpa nwere ike igbochi oria enwe?
Dị ka BBC si kwuo, ọgwụ mgbochi kịtịkpa egosila na ọ dị 85% dị irè n'igbochi ọrịa anwụ anwụ ma ka na-ejikwa mgbe ụfọdụ.
Rena McIntyre, bụ ọkà mmụta sayensị ọrịa na-efe efe na Mahadum New South Wales dị n'Australia, kwukwara na nchọpụta egosila na n'ihi na nkwusioru nkwusioru nke ịgba ọgwụ mgbochi kịtịkpa adịla afọ 40 ruo 50, ikike nchebe nke ọgwụ mgbochi kịtịkpa adalatala. , nke nwere ike bụrụ ihe na-ebute ọrịa nrịanrịa anwụ.ihe na-eme ka njọ.Ọ dụrụ ndị ọchịchị ọdụ ka ha chọpụta kọntaktị ndị ha na ndị ọrịa enwe na-enwe ma gbaa ha ọgwụ mgbochi ọrịa.
9. Olee otú ọtụtụ mba si emeghachi omume?
Onye ọrụ CDC McQueston kwuru na 23rd na ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ọgwụ mgbochi kịtịkpa, na ọ ga-ebute ụzọ na mmekọrịta chiri anya na ndị ọrịa enwe, ndị ọrụ ahụike na ndị otu nwere nnukwu ihe ize ndụ nwere ike ibute ọrịa siri ike.Ụlọ ọrụ nchekwa ahụike UK kwadoro ọgwụ mgbochi kịtịkpa maka otu ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ.
Freitas, onye isi ụlọ ọrụ General Directorate of Health na Portugal, tụrụ aro na ọ dị mkpa ka ndị butere ọrịa ahụ na ndị ha na ha na-akpachi anya ghara ịdị na-ekerịta uwe na ihe ndị ọzọ.Belgium enyela iwu ka a ga-anọpụ iche ụbọchị iri abụọ na otu maka ọrịa oria enwe.
Robert Koch Institute, ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa ọrịa na Germany, na-eme nyocha na ndụmọdụ mgbochi ọrịa, gụnyere ma ọ bụrụ na akwadoro ikewapụ ikpe enwetara na ndị na-akpachi anya, yana onye a na-atụ aro ka a gbaa ọgwụ mgbochi kịtịkpa.
10. Olee otú ị ga-esi kpachara anya?
WHO na-atụ aro na ọrịa ọ bụla n'oge njem na-aga ma ọ bụ mgbe ọ na-alọta na mpaghara ndị nwere ọrịa, kwesịrị ịkọrọ ndị ọkachamara ahụike.
WHO na-ekwusikwa ike mkpa ọ dị iji ncha na mmiri ma ọ bụ ihe mkpocha mmanya na-aba n'anya na-amata ịdị ọcha aka.
11. Olee otú ịchọpụta?
Ọkpụkpọ anụ na-ebutekarị site na ụmụ irighiri mmiri iku ume na kọntaktị akpụkpọ anụ mucous, yabụ ụzọ kacha mma isi chọpụta ya bụ ule PCR nucleic acid yiri nke ahụ.COVID-19.Jiri ngwa nchọpụta nucleic acid nje virus enwe (usoro nyocha PCR-fluorescent).
Ọrịa enwe bụ nje na-ebute ọrịa a na-ebute ọrịa enwe na ma mmadụ ma anụmanụ.
Nje Virus Monkeypox bụ Orthopoxvirus, ụdị nke ezinụlọ Poxviridae nwere nje ndị ọzọ.
ụdị na-elekwasị anya mammals.A na-ahụkarị nje a na mpaghara oke ọhịa ebe okpomọkụ nke etiti na
West Africa.A na-eche na ụzọ mbụ isi ebute ọrịa bụ ịkpọtụrụ anụmanụ ndị butere ọrịa ma ọ bụ
Mmiri nke ahụ ha. genome anaghị ekewa ma nwee otu molekul nke linear.
DNA nwere eriri abụọ, 185000 nucleotides ogologo.
Usoro nchọpụta nke usoro nyocha PCR-fluorescent n'ahịa na-abụkarị ibu ụzọ wepụ na sachaa DNA nke nje ọrịa enwe, wee mee mmeghachi omume PCR.Ọ bụrụ na a na-eji teknụzụ PCR Direct Direct nke Foregene, a ga-ahapụ usoro na-agwụ ike nke ịwepụta DNA enwe, na DNA nwere ike ịpụta ozugbo site n'aka onye na-ahapụ ihe nlele, na mmeghachi omume PCR nwere ike ime ozugbo.Dị mma na ngwa ngwa!
Ngwaahịa ndị emetụtara:
Ihe nnọchi anya mwepụta nlele